★မြန်မာ့အလင်း★: Thaing - Тренировки2002г31
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 5:00 AM
ဆိုပြီကျားဖမ်းမယ်၊ဆင်ဖမ်းမယ်အော်နေတဲ.ဘလော.ဂါ ၈၈၈၈ တွေလည်းငြိမ်သွားတာနဲ.အခုေ၇းဖြစ်တာပါ။ဒါပေမဲ.ေ၇ွှးကောက်ပွဲနားနီးနေတာကြောင်.နအဖလူလို.စွတ်စွဲအုံးမှာမြင်ယောင်ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ.တိုင်းပြည်ချစ်သူ
များကတော.များများစားစားမ၇ှိပါဘူး။သူတို.ကတော. ဦး၇ာဇတ်၊ မောင်သော်က ခေါ် ဗိုလ်မှူးဘသော်( တပ်မတော်ေ၇)၊မြအေး၊မဝေနှင်းပွင်.အေးတို.ဖြစ်ကြပါတယ်။
မောင်သော်က ခေါ် ဗိုလ်မှူးဘသော်သည်လည်းအတွက်အချက်မှားသူတဦးသာဖြစ်သည်။၈၈၈၈ လေးလုံးအ
သူများနှင်.တန်းတူထားသင်.ပါသလား။ဒါမှမဟုတ်(hight profile) နိုင်ငံေ၇းလှုပ်၇ှားသူများနှင်.တန်းတူထားသင်.ပါသလား။ဒါမှမဟုတ်ထို၂ ၇ပ်စလုံးတွင်မပါဝင်ဟုပြောသင်.ပါသလားစာဖတ်သူများသာကိုယ်ပိုင်သတ်မှတ်ကြပါ။
ပထမဦးဆုံးပြောလိုသည်မှာ ၈၈၈၈ ကျောင်းသားဟုအင်တာနက်စာမျက်နှာတချို.တွင်ဖော်ပြခြင်းခံလာ၇သူတဦးဖြစ်သောကိုမြအေးဆိုသူအကြောင်းဖြစ်သည်။ကိုမြအေးသည် ၈၈၈၈ လေးလုံးတုံးကကျောင်းသားဖြစ်
ထိုစဉ်က ၈၈၈၈ လေးလုံးကျောင်းသားများကိုလွှတ်မြောက်နယ်ပယ်များ၊တတိယနိုင်ငံများနှင်.မြန်မာပြည်တွင်းတွင်
တွေ.၇ှိနိုင်သည်ကိုအများအသိပါ။သို.သော်ထိုသူများသည် ၈၈၈၈ ကျောင်းသားဟူ၍ကြွေးကြော်ထွက်မပေါ်
လာကြပါ။မိမိနိုင်၇ာနေ၇ာမှသာ ဒီမိုကေ၇စီေ၇းလှုပ်၇ှားခဲ.သူ၊ဆဲသူများသာဖြစ်ကြသည်။၈၈၈၈ တုန်းကကျောင်းသား
ဖြစ်ခဲ.သော်လည်း ၈၈၈၈ ကျောင်းသားဟူ၍နိုင်ငံေ၇းနယ်ပယ်တွင်သုံးစွဲ၇န်၊ထိုသုံးစွဲသူတွင်နှစ်ပေါင်များစွာအနစ်
နာခံခဲ.၊အနစ်နာခံဆ၊ဲစံပြုထိုက်သောသာဓကများနှင်.ပြည်.စုံ၇မည်ဖြစ်သည်။အထူးသဖြင်. ၈၈၈၈ ကျောင်း
ဟုဆိုသောကိုအေးလွင် ကို မင်းကိုနိုင်၊ကိုကိုကြီးတို.အပါအ၀င်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များနှင်.တတန်းထားလျှင်
အနှီပါကိုမြအေးဆိုသောပုဂ္ဂိုလ်သည် ၈၈၈၈ ကျောင်းသားဟူ၍အင်တာနက်စာမျက်နှာ( အထူးသဖြင်.ဧ၇ာဝတီ၊မဇိမ္မ)များတွင်ပေါ်ထွက်လာခဲ.ပြီး၊၇ပ်တန်.မနေဘဲ ၈၈၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်၊ထိုမှတဆင.်မှတဆင်. ၈၈၈၈
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ၇ဲ.ဦးစီးခေါင်းဆောင်၊တဖန်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးတွင်ေ၇ပန်းစားပြီး burmadigest တွင်
ကမ္ဘာအ၇ပ်၇ပ်ကအမှတ်ပေး( အင်္ဂလန်၊ဂျပန်၊အမေ၇ိက မှ ဟန်ဆောင်တိုင်း၇င်းသားများနဲ.ဒီမိုလုပ်စားမြန်မာ
ဒေါ်စု၊မင်းကိုနိုင်တို.အပါဝင်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များအပြတ်အသတ်၇ှံးကာ အဆိုပါ မိုးကျေ၇ွှကိုယ် မြအေးက
ပထမ ချိတ်သွားခဲ.တာကိုဒီနေ၇ာတွင် http://burmadigest.info/2007/12/14/ko-mya-aye-burmese-muslim-88-students-group-leader/ (burmadigest နော် ဘားမားဆိုတော.ဗမာတပြည်လုံးကိုယ်စားပြုတာ၊နယ်နယ်၇၇ မဟုတ်ဘူး) ဖတ်၇ှနိုင်ပါတယ်။ burmadigest ကိုဘယ်သူတွေ၊ဘယ်လိုအကြံနဲ.လုပ်ကြတာတွေးသာကြည်.တော.၊
အနှီပါ ၈၈၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ၇ဲ.ခေါင်းဆောင်၊ဒေါ်စုကိုအပြတ်အသတ်ကျော်အောင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအ
သီးသီးမှ burmadigest တွင်တခဲနက်ပထမ ချိတ်အောင်မဲပေးခံသော ကိုမြအေး ဆိုသူကိုအင်တာနက်တွင်ကပ်၊
မသိ၊မည်သည်.နိုင်ငံမှလည်းဆုတံဆိပ်မ၇၊ UN မှလည်းမြအေးဆိုတာချိုပါသလားမေးယူ၇အောင်ကျော်ကြား၇ုံသာ
မက၊ နအဖ မှူးကြီးသန်းေ၇ွှက၇ဲ.အေ၇းတယူဆွေးနွေး၇မည်.စ၇င်းတွင်ဘိတ်ဆုံးကတောင်မပါ (မိုးသီးဇွန်ဘလော.ကမှုဆလိမ်တွေကတော.မင်းကိုနိုင်နာမည်နဲ.တွဲသုံးပြီးနေပြည်တော်ကခေါ်ယူဆွေးနွေးနေတယ်
ဝေနှင်းပွင်.သုန်( မြန်မာတွေအတွက်ပေးစ၇ာနာမည်ကျန်သေးလား) အင်္ဂလန်မြန်မာအသင်းကိုအသုံးချပြီး၊
၇ှင်း၇ှင်းလေးဘဲ၊မြန်မာပြည်မှာနိုင်ငံေ၇းအကျဉ်းသား၂၀၀၀ ကျော်၇ှိတာမှာအဲဒီလူတွေထက်ကျော်ပြီး မြအေး
အောင်လုပ်တာကို၊မူဆလင်တွေက ၈၈၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဆိုပြီေ၇ှာက်အော်ပေးတယ်၊အဲဒါတွေမြန်မာ
မိုဟာမက်တပည်.တွေလိမ်တာတော.ကန်းကုန်တယ်။ဒေါ်စုကိုကျော်ပြီး အတင်း ၈၈ ခေါင်းဆောင်ဆိုနေကြတဲ.ဘယ်ကပေါ်လာမှန်းမသိတဲ.မိုးကျေ၇ွှကိုမြအေးကနံပါတ်၁ဆိုဘဲ၊၇ီ၇တယ်၊ http://burmadigest.info/2007/12/14/ko-mya-aye-burmese-muslim-88-students-group-leader/
အင်တာနက်ပေါ်မှာဖအေတူသမီးဆို ပြီးမြအေးသမီးကိုဒီမိုကုလားတွေဆွဲတင်၇ုံမက၊ခုခွေးသခိုးမြအေးက ၈၈ အဖွဲ.ခေါင်ဆောင်ဆိုဘဲ၊ဒေါ်စုထက်တောင်နာမည်ကြီးတယ်ဆိုဘဲ၊ http://burmadigest.info/2007/12/14/ko-mya-aye-burmese-muslim-88-students-group-leader/
ကဲပါ ချစ်အိကိုရာ... ရှက်ရမ်း ရမ်းပြီးရှောက်အော်မနေပါနဲ့ကွာ... သမိုင်းဆိုတာလိမ်လို့မရပါဘူး သမိုင်းကို လိုရာဆွဲယူဖို့ကြိုးစားမနေပါနဲ့... ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း သခင်တွေဘာတွေလုပ်ပြီး သခင်ရူး ရူးမနေပါနဲ့... ကိုမြအေးကိုတော့ ခေါင်းဆောင်အဖြစ်နဲ့ ထောက်ခံမယ့်သူတွေက အများကြီးပါ... မင်းကိုတော့ လမ်းဘေးက ချေးစားခွေးတစ်ကောင်ကတောင် သခင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုပါ့မလား??? စောက်ရှက်က တစ်ပြားဖိုးမှမရှိဘူး... သူ့ကိုယ်သူ သခင်တဲ့ဗျာ... ဟားဟားဟားးး...။